Ny fampihenana ny adidin'ny mpandeha UK dia manome tosika vaovao amin'ny dia an'habakabaka an-trano
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Ny fampihenana ny adidin'ny mpandeha UK dia manome tosika vaovao amin'ny dia an'habakabaka an-trano
Ny fampihenana ny adidin'ny mpandeha UK dia manome tosika vaovao amin'ny dia an'habakabaka an-trano.
Ny zotram-piaramanidina manana fisiana lehibe ao amin'ny tsena anatiny UK dia apetraka handray soa betsaka indrindra amin'ireo fiovana ireo. Ny APD dia voatsikera ho nitazona ny zotram-piaramanidina tsy hampiasa fiaramanidina lehibe ao an-toerana ary mety hamaha ny gadra izany vaovao izany.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny fangatahana fitsangatsanganana an-trano, ny zotram-piaramanidina dia afaka mahazo tombony betsaka amin'ny fanapahana APD.
Ny fahatapahan'ny APD dia horaisin'ny zotram-piaramanidina ao an-toerana, indrindra ireo manana tambajotra lehibe kokoa.
Ny zotram-piaramanidina UK dia nivezivezy nankany amin'ny toerana an-trano ho setrin'ny fisondrotry ny fitakiana, raha toa kosa ny fitakiana fitsangatsanganana iraisam-pirenena dia nijanona.
Ny zotram-piaramanidina an-trano any UK dia hahita ny fampihenana ny adidin'ny mpandeha an-habakabaka (APD) ho toy ny fampiroboroboana lehibe amin'ny indostrian'ny fiaramanidina. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fangatahana fitsangatsanganana an-trano, miaraka amin'ny fampihenana ny APD amin'ny 2023, dia mety hahazo tombony betsaka ny zotram-piaramanidina.
Ny fahatapahan'ny APD dia horaisin'ny zotram-piaramanidina ao an-toerana, indrindra ireo manana tambajotra lehibe kokoa. Ny fampihenana ny hetra £7 ($9.65) dia ahafahan'ny mpitatitra mampihena ny vidiny mba hanentanana bebe kokoa ny fangatahana. Ankoatr'izay, ny zotram-piaramanidina UK dia nivezivezy nankany amin'ny toerana an-trano ho setrin'ny fisondrotry ny fitakiana, raha toa kosa ny fitakiana fitsangatsanganana iraisam-pirenena dia nijanona. Miaraka amin'ny tambajotra midadasika, ny mpandeha UK dia mety ho vonona kokoa handeha amin'ny sidina an-trano amin'ny ho avy rehefa misy ny fampihenana ny hetra. Na izany aza, ny fisondrotan'ny tinady dia tsy hitranga raha toa ka alefa amin'ny mpanjifa amin'ny endriky ny vidin'ny tapakila mora kokoa ny fitsitsiana.
Logan Air, British Airways, ary ny Eastern Airways dia manana tambajotra an-trano midadasika ary anisan'ireo mpilalao hahazo tombony amin'ny fampihenana ny APD ao an-toerana ny UK. Loganair dia hahazo tombony betsaka, ka ny zotram-piaramanidina no nameno ny banga navelan'ny flybe mandritra ny areti-mifindra. Efa ela ny indostria no nitaky ny hampihenana ny APD, ary ny fampihenana dia mety hahita zotram-piaramanidina sasany manolotra lalana fanampiny satria lasa mifaninana kokoa ny vidiny raha oharina amin'ny karazana fitaterana hafa.
Ankoatra izany, flybe 2.0 dia mety hahazo tombony. Ny sandan'ny APD any Angletera dia notononina ho antony lehibe nahatonga ny antony flybe nirodana. Ny fanapahana lehibe dia hanome fepetra fiasa tsara kokoa ho an'ny mpitatitra rehefa averina.
Ho an'ny mpandeha UK maro dia niova ny toeran'izy ireo tato ho ato. Ny fanadihadiana momba ny mpanjifa vao haingana dia nanambara fa ny 73% amin'ireo namaly ny UK dia 'tena', 'tena', na 'somary' niahiahy momba ny toerany ara-bola noho ny areti-mifindra, manasongadina ny tombotsoan'ny fampihenana ny APD.
Ny zotram-piaramanidina dia mety hiady mafy hanentana ny fangatahana mandritra ny vanim-potoana fanarenana COVID-19. Miaraka amin'ny olana ara-bola be dia be, ny fampihenana ny APD dia ahafahan'ny mpitatitra hampidina ny vidiny sy hanome fahafaham-po kokoa ny filan'ny mpandeha mitsinjo ny tetibola. Fanampin'izay, ny fatiantoka dia noheverina ho anton-javatra ambony indrindra nataon'ireo mpamaly UK rehefa nanapa-kevitra ny handehanana fialan-tsasatra, miaraka amin'ny 48% amin'ireo namaly no nisafidy io lafin-javatra io ho zava-dehibe indrindra.
Ny fampihenana ny APD amin'ny sidina an-trano dia mety hampitombo ny fangatahana rehefa tonga ny tahan'ny vaovao ho an'ny 2023. Ao anatin'ny roa taona, ny dia iraisam-pirenena dia mety ho mora kokoa ho an'ny mpandeha UK. Ny fampihenana ny vidin'ny sidina an-trano dia mety hanampy ny tsenan'ny fitsangatsanganana any Angletera hitazonana ny sasany amin'ireo mpandeha izay nisafidy ny hiala sasatra tany Angletera nandritra ny areti-mifindra.